Plazamedia သို့ Intinor ၏ Direkt Router မျိုးစုံရောင်းချခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Plazamedia မှ Intinor ရဲ့မျိုးစုံ Direkt Router ရောင်းချ
Plazamedia မှ Intinor ရဲ့မျိုးစုံ Direkt Router ရောင်းချ
Umea, ဆွီဒင်ဗြိတိန်, 28 မတ်လ 2019 - Intinor နည်းပညာ, အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဆွီဒင်ရဲ့ဦးဆောင်ပြုစုသူ, Plazamedia, မြူးနစ်တစ်ဦးဦးဆောင်တိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုအိမျသုံး Intinor Direkt router များရောင်းချခြင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။
Plazamedia ထက်ပို 150 လူတွေကန်ထမ်းများနှင့်နှစ်စဉ် 2000 ဖြစ်ရပ်များထက်ပိုမိုထုတ်လုပ် - မကြာမီလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ရပ်များတစ်ခုတိုးပွားလာထည့်သွင်းရန်။
MCR Stefan Valentin ၏ Plazamedia ဌာနမှူးအီလက်ထရောနစ်အားကစားအလွန်လျင်မြန်စွာအွန်လိုင်းလာမယ့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ထပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အာဏာလိုအပ်သိတယ် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့ Intinor ရဲ့ Direkt Router ရဲ့ IP-စီး orchestration ၏ဆွီဒင်ကြည်းတပ်ဓါးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ! "
အဆိုပါ Direkt router များ၏နှစျခုတစ်ခုတည်းကိုသာ Plazamedia ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် Legends ၏လိဂ်များအတွက်ဖြစ်ရပ်များလည်းပါဝင်သည်လိမ့်မည်ဟုသစ်ကို '' eSPORTS1 '' ရုပ်သံလိုင်းအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည် Dota 2; ကောင်တာ Strike; Overwatch; သို့မဟုတ်ဖီဖာ 19 ။ ကျန်ရှိနေသေးသော router ကို Plazamedia ၏အဓိကဘဏ်ဍာ, မြင်းပြိုင်ပွဲများ၏တဦးတည်းမှုအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အသစ် HLS ဖွ-ဆွဲခြင်းနှင့် RTMP-ခံယူလုပ်ဆောင်ချက်ကို Plazamedia Plazamedia ရဲ့အီလက်ထရောနစ်အားကစားထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်နှင့်အတူတိုက်ရိုက် url + စီး-name နဲ့ interface ကို generate မှခွင့်ပြုပါတယ်။
အတော်များများကအီလက်ထရောနစ်အားကစားထုတ်လုပ်သူများပြီးသားတစ်ချိန်တည်းမှာ Intinor ရဲ့စီးပွားဖြစ် BRT ™ (Bifrost နှင့်အတူ 20Mbits မလိုအပ်တဲ့စီးမှတက်မယ့်အရည်အသွေးမြင့်ပေးစဉ် Twitch, YouTube နဲ့ / သို့မဟုတ် Facebook များအတွက်စီးပေး, သူတို့ရဲ့အဓိကအန်ကုဒ်အဖြစ် Direkt Link ကိုထိန်သိမ်း + သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) စီး protocol ကို။
Intinor CEO ဖြစ်သူ Roland Axelsson Plazamedia အီလက်ထရောနစ်အားကစားသို့ entry ကိုအပါအဝင်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဘဏ်ဍာ၏ရှေ့တန်းမှမှာအလွန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Direkt Router မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအသိအမှတ်ပြုရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်း "ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏မျိုးစုံစွမ်းရည်, အဘဏ်ဍာ Plazamedia အမျိုးအစားများနှင့်များစွာသောအခြားသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ "
Intinor နှင့်အတူပါဝင်နေသည် NewTek NAB နှင့် Direkt Router မှာအဖြစ်မကြာသေးမီကစတင် Direkt Router Lite, အ NDI ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်® Intinor နှင့်အခြားဦးဆောင် NDI developer များမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ဗဟို Pavilion, Booth SL5616, NAB ပြရန် 2019-9 ဧပြီလကနေ Las Vegas မှာ 11 ။
အယ်ဒီတာများမှမှတ်ချက်: * Norse ဒဏ္ဍာရီမှာတော့ Bifrost Midgard (ကမ္ဘာမြေ) နှင့် Asgard, နတ်ဘုရားများ၏ဘုံ [ဝီကီပီးဒီးယား] အကြားရောက်ရှိတဲ့မီးလောင်သောသက်တံ့တံတားဖြစ်ပါတယ်
Intinor ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့် IP ကိုကွန်ရက်များကျော်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အလှူငွေများအတွက်အဖြစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကို web TV အတွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, Intinor အသေးစားထုတ်လုပ်မှုကနေအဓိကရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများအထိဖောက်သည်ရှိပါတယ်။ Intinor လည်းကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတူအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုံးစံ-ဒီဇိုင်းစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများတွင်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.intinor.se.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB Bifrsot ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး BRT Dickt Link ကို + ထိန်သိမ်း Direkt Router အီလက်ထရောနစ်အားကစား Facebook က Intinor Intinor နည်းပညာ အိုင်ပီကွန်ရက်များ IP- Stream orchestral NAB NDI ဗဟို Pavillion NewTek Plazamedia Twitch YouTube ကို 2019-03-29
ယခင်: Anevia မိတ်ဆက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးတိမ်တိုက်-ဇာတိ CDN ဖြေရှင်းချက်
နောက်တစ်ခု: ဒစ်ဂျစ်တယ်အားကစားအကြောင်းအရာအကောင့် Manager ကို